Rfid Lf / hf / uhf Reader / umbhali Abakhiqizi - China Rfid Lf / hf / uhf Reader / umbhali abahlinzeki nefektri
I-pcb emangelengele ye-android mobile smartphone windows windows 9.0 ephathekayo uhf rfid barcode scanner pda 4g
Idizayini yekhiphedi yezimboni neyomuntu kanye nesikrini sokuthinta esiqinile esingu-5.5 intshi Gorilla Glass 3 kanye nesisombululo esiphezulu sesibonisi esingu-720 * 1440 kuzolingana nezindinganiso eziphakeme ku-logistics, express kanye ne-retail.
I-Android Industrial PDA Bluetooth WiFi Handheld RFID Terminal Mobile Computer Barcode Scanner
Imikhiqizo ye-MD5000C serial inweba ama-serial womkhiqizo we-Handheld-Wireless ku-Android OS 7.0 ngokuxhumana kwenethiwekhi kwejubane eliphezulu kwe-4G. Ngaphakathi kwensimbi ephathekayo ephathekayo, izinga lokufaka uphawu lwe-IP65 lamanzi / uthuli, ukusinda kwe-1.5m / 4.5ft, ukwakheka kwe-ergonomic, isakhiwo sokubumba ngokweqile, ubuchwepheshe bokushaja ngokushesha, nesikrini se-Gorilla Glass 3 esine-intshi engu-5.0 konke kuhlonyelwe ukuqinisekisa ukusebenza . Iprosesa yakamuva ye-1.3GHz quad-core 2GB RAM / 16GB ROM nokukhuliswa okungafika ku-32GB konke kwenzelwe ukukhuphula izinga lesipiliyoni.
Ishibhile eshibhile se-Hand Range Barcode Scanner yeWindows Mobile Pda RFID Reader
Imikhiqizo ye-MD947H serial inweba ama-serial womkhiqizo we-Handheld-Wireless ku-Android OS 7.0 nge-4G ukuxhumana kwenethiwekhi ngesivinini esikhulu.
Eshibhe kakhulu i-OEM Handheld Warehouse Logistics Smart PDA Pos System UHF Rfid Reader
Imikhiqizo ye-MD801NB serial inweba ama-serial womkhiqizo we-Handheld-Wireless ku-tablet ye-Android OS 7.0 yezimboni. Ngaphakathi kwetheminali yethebhulethi ehlanganisiwe, izinga lokufaka uphawu kwe-IP65 yamanzi / uthuli, ukusinda kwe-1.5m / 4.5ft, ukwakheka kwe-ergonomic, ukwakheka okubunjiwe kakhulu, ibhethri langaphakathi kakhulu le-8000mAh, nesikrini se-Gorilla Glass 3 esikhulukazi kakhulu esingu-8.0 intshi konke kuhlomele ukuqinisekisa ukusebenza. I-1.5GHz esheshayo ye-octa-core processor 2GB RAM / 16GB ROM nokukhuliswa okungafika ku-128GB konke kwenzelwe ukukhuphula izinga lesipiliyoni.
I-Supermarkt Support PDA QR Code Scanner Industrial Payment PDA PDA
Imikhiqizo ye-MD711H serial inweba ama-serial womkhiqizo we-Handheld-Wireless ku-tablet ye-Android OS 7.0 yezimboni. Ngaphakathi kwetheminali yethebhulethi ehlanganisiwe, izinga lokufaka uphawu lwe-IP65 lamanzi / uthuli, ukusinda kwe-1.5m / 4.5ft, ukwakheka kwe-ergonomic, ukwakheka okubunjiwe ngaphezulu, ibhethri langaphakathi elikhulu le-10000mAh, nesikrini se-Gorilla Glass 3 9H esinzima sonke sikulungele qinisekisa ukusebenza. Iprosesa esheshayo ye-1.3GHz quad-core 2GB RAM / 16GB ROM futhi kufinyelela ku-32GB konke kuklanyelwe ukukhuphula izinga lesipiliyoni.
Isikrini se-Touch Screen Hardware Billing POS Machine System Inani leSoftware leRejista ye-Cash engu-7 ethengiswayo
Le hardware engenhla iqinisekisiwe unyaka owodwa !!
I-P18-L2 Bus Card esemthethweni ye-USB bus rfid smart card reader
I-P18-L2 Bus Validator isekela wonke amakhadi ahambisana ne-ISO14443 Type A & B, Mifare Classic, DESFire, FeliCa, eyakhelwe ngaphakathi iprosesa enamandla ye-32bit ARM Cortex-A9. Kunezisekelo ezine ze-SAM zokubamba ama-SAM Wokuthenga ukuqinisekisa ukuphepha nobuqotho bokuthengiselana.
Xhumana ne-IC Card Reader Nge-USB Interface
I-T6 isebenzisa isikhombimsebenzisi se-RS232 ne-USB, slut yekhadi lokudonsa. Ukushaja kokunikezwa kwamandla ngekhibhodi noma isikhombimsebenzisi se-USB ne-USB kufakwe ubuchwepheshe obungashayeli. I-M6 ivelele ngoba isekela ama-sluts amakhadi ama-4. Isikhala semakhadi esiyinhloko silungele imodi yokusebenza ejwayelekile
I-T200 Metro Reader Module engabanjiswanga i-RS232 Interface Linux 3.0 Industry Leverl Metro Tickets Card Reader Writer
I-T200 ifunda ezingeni lomkhakha wokucubungula amathikithi kamasipala. Ixhasa wonke amakhadi we-smart ahambisana ne-ISO14443
Thayipha i-A & B, i-Mifare, eyakhelwe ngaphakathi kwe-processor enamandla ye-1G Hz ARM A9 ukusebenzisa i-Linux OS. Futhi kunezikhala ezingama-8 eziphezulu ze-SAM zokuxhasa amasistimu okhiye amaningi.
I-T10-DC2 Module Smart Card Reader Module Support ISO7816 ikhadi lokuxhumana / lokuxhumana / lamagnetic
I-T10-DC2 iyi-module engu-3-in-1 yokufunda / yombhali, kufaka phakathi amakhadi wokuxhumana othintekayo, amakhadi angaxhumani namakhadi omugqa kazibuthe. I-T10-DC2 iza nophondo olutholakalayo, thinta isixhumi sekhadi le-smart, ikhanda likazibuthe namasokhethi ama-4 SAM.
Umfundi we-D8N NFC Reader 13.56Mhz umbhali wokufunda ikhadi le-chip ye-USB RS232
I-D8 NFC Reader iyisifundi esixhumene ne-PC esihambisana nezici ze-Full Option NFC, athuthukiswe ngokususelwa kubuchwepheshe be-13.56MHz bokuxhumana. Inezikhala ze-4 SAM (Secure Access Module) ezinganikeza ukuphepha okuningana okuphezulu kokuthengiselana okungaxhunyanwa nako.
13.56MHZ ISO14443 Uhlobo A / B Isifundi sekhadi le-USB Smart
Umfundi wekhadi le-NC8 oxhumana naye ongathintwa ngumfundi / umbhali oxhumene ne-PC okhiqizwe ku-13.56MHz Contactless (RFID) Technology futhi walandelwa i-Near Field Communication (NFC), esekela amakhadi e-ISO 14443 A ne-B kuphela kepha ne-NFC neFeliCa ubuchwepheshe bokuxhumana, ukuthobela kweCCID.